အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ပေးတဲ့ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးကို ယူမှာလား | Mizzima Myanmar News and Insight
အားလုံး သိကြသင့်အတိုင်းပဲ. အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တပ်မတော်ရဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က အာဏာသိမ်းခြင်းကို ခံထားရပါတယ်။ ဒီအာဏာသိမ်းမှုကတော့ ဘာကြောင့်ဆိုတာကို အထွေအထူး မရှင်းပြ တော့ပါဘူး။
အာဏာသိမ်းမှုရဲ့ အခြေအနေ အကျဉ်းချုပ်ကို တင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ တပ်မတော်ရဲ့ အကြောင်းပြချက်က ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲ ၁၀. ၅ သန်းလောက် အငြင်းပွားစရာ (မဲထပ်နေတာ- မဲစာရင်းမှားတာ- လူနာမည်တွေ ထပ်နေတာ စတာတွေနဲ့ပတ်သက် ပြီး ပြောတာပေါ့)တွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်(UEC)နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)အစိုးရတို့ကနေ ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲလို တောင်းဆိုတာမှာ UEC ရော၊ NLD အစိုးရရောက တိကျသေချာတဲ့ ဖြေရှင်းမှုမျိုး မလုပ်တော့ တပ်မတော် က တစ်ဆင့် ထက်တက်လာပြီးတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။ အဲနောက်မှာပဲ မဲစာရင်း အငြင်းပွားမှု မဖြေရှင်းပေးတဲ့ ကိစ္စကနေ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအောက်က နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းပါ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း တပ်မတော်ကို ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှုတွေကို ပြန်လည်စိစစ်ပေးဖို့ဆိုပြီး တော့ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ တပ်မတော် ထောက်ခံသူတွေ၊ တပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ် ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ ပါတီဝင်တွေ၊ ပါတီတွေကလည်း ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြသလို ကန့်ကွက်စာတွေထုတ် တောင်းဆိုလာကြတော့ ပိုမို အရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။
အခုလို တဖြေးဖြေး အရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းမှာလားဆိုတဲ့ အသံတွေ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပဲ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်း လိုက်ပါတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ တပ်မတော်ဟာ တူရကီနိုင်ငံရဲ့အာဏာ သိမ်းမှု မအောင်မြင်တဲ့ အခြေအနေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တိုင်းပြည်ကို ထိန်းကြောင်းပုံ အခြေ အနေ၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ပြင်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ လွယ်လင့်တကူ ချိတ်ဆက်လို့မရအောင် ထိန်းချုပ် ထားမှု အခြေအနေတို့ကို သေချာ လေ့လာပြီးမှ အာဏာသိမ်း ခဲ့တဲ့ ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် အဲလို ပြောရတာလဲဆိုတော့ ပထမဆုံး အနေနဲ့ တူရကီနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အာဏာ သိမ်းတဲ့အပေါ် ပြည်သူက ပြန်လည်တွန်းလှန်ပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတာကို တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန်ဟာ သိသိချင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ စစ်တပ် အာဏာ သိမ်းဖို့ ကြံနေတယ် အာဏာသိမ်းလိမ့်မယ်၊ ပြည်သူလူထုက စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှာကို လက်မခံဘဲ လမ်းပေါ် ထွက် တားဆီးကြပါလို့ ရေးသား သတိပေး နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။
အဲလို အာဒိုဂန်ရဲ့ လူမှုကွန်ရပ်ပေါ်မှာ နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်သူက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး အာဏာသိမ်းမယ့် စစ်တပ်ကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲနောက်မှာ တူရကီစစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှု မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘဲ ပြည်သူက စစ် တပ်ကို ပြန်လည် ဖမ်းချုပ်ပြီး ပြည်သူက အာဏာသိမ်းပြီးတော့ အာဒိုဂန်အစိုးရကို အာဏာအပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာ မသိမ်းခင် အချိန်ထိ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ အားလုံးဟာ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကမ္ဘာ့အခြေအနေကို ကြည့်နိုင်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲလို အခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှာကို ရိပ်မိလို့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က ပြည်သူသို့ပန်ကြားချက်ဆိုတာကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတော့ အဲလို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ Chari NLD အကောင့်နဲ့ Aung San Suu Kyi ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကြီး ရှိရဲ့နဲ့ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့)က အာဏာ သိမ်းနိုင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပြည်သူတွေ နှိုးနှိုးကြားကြား နေကြဖို့ ၊ ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ တူရကီ သမ္မတ အာဒိုဂန်လို လူမှုကွန် ရက်ကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရတယ်။
စာရေးသူ သတင်းအချက်အလက်တွေ စုံစမ်းသိရှိ ရသလောက်ဆိုရင် NLD က ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ NLD ပါတီကို အကြံပေးနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဟာဆိုရင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ ပြည်သူ့ လွှတ် တော် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူမှု အထမြောက်ဖို့နဲ့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှု ခြိမ်းခြောက်ခံနေရမှုကို ကျော်လွှား နိုင်ဖို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂ နွေနေ့)ညက အလွန် အရေးကြီးကြောင်း သိခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ဟာ လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးချမှု မပြုလုပ်ဘဲ မေ့လျှော့ခဲ့ကြသလို ဖုန်းလိုင်းနဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ တွေကို ပိတ်ထားခဲ့ရင် ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြီး လူထုကို နှိုးဆော်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားမှု အားနည်းခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီအတွက်လည်း အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ဟာ ဖုန်းလိုင်းတွေနဲ့ အင်တာနက်တွေကို ပိတ်ထားဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို နားလည်ခဲ့ပြီးတော့ အာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာ အကုန်လုံးကို အဆက်ပြတ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
ဒုတိယ တစ်ချက်ကတော့ တပ်မတော်ဟာ အခု အာဏာသိမ်းထားပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံက အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်စဉ် တွေအတိုင်းပဲ တခြားသော Institution (၂၀၀၈ ကို မဖျက်ဘူး၊ တခြား နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို မဖျက်သိမ်းဘူး၊ တခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မဖမ်းဆီးဘူး၊ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေကိုပဲ အဓိက ထိန်းချုပ်ထားတယ်၊ သူ့ဘက် ပါမယ့် လူတွေကို နေရာပေး ကမ်းလှမ်းတယ်၊ NLD မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာ ပေးမှုတွေကို ကမ်းလှမ်းပြီး နေရာပေးမှုတွေလုပ်တယ်)တွေကို မထိဘဲ ဒီအတိုင်း ထားပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ဖြစ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖျက်ပြီးတော့ သူယုံကြည် စိတ်ချရမယ့်လူ၊ လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင်မယ့် လူလို့ ယူဆသူတွေကို နေရာပေးကာ ထောက်ခံမှု ရယူခဲ့ပါတယ်။
အဲနောက် တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ကျဆင်းနေတာကို ပြန်လည် ဦးမော့အောင် အသဲအသန် သူရုန်းကန်လိမ့်မယ်၊ ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ကျင်းပပေးလိမ့်မယ်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ပြည်သူလူထု အားလုံး ထိုးနိုင် ဖို့အတွက် လုပ်ပေးပြီးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ သူ့ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လူထု ထောက်ခံမှုကို ရအောင် ယူလိမ့်မယ်။
တတိယ တစ်ချက်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ပုံတွေကို ဆန့်ကျင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပ နိုင်ငံတွေ မသိအောင် လူမှုကွန်ရက်တွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ နည်းစနစ်ကို အတုယူထားပါလိမ့်မယ်။
အဲလို အတူယူလိုက်ခြင်းကတော့ လတ်တလော သူအာဏာသိမ်း ထားမှုအပေါ် မနှစ်သက်၊ လက်မခံတဲ့ ဆန့် ကျင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာကို မသိစေချင်တာကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာ မသိစေချင်တာကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ လူထုဆန္ဒပြပွဲကနေ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာတာကို ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ မသိစေချင်တာကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကြမယ့် လူအုပ်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အင်တာနက်ကနေ အချိတ်အဆက် မလုပ်နိုင်အောင် တစ်ကြောင်း၊ စစ်အာဏာ သိမ်းမှုကို လူထု လက်မခံဘဲ ဆန့်ကျင်နေတာကို အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တပ်သားတွေ မသိရအောင် တစ် ကြောင်း၊ လူဖမ်းပွဲ လုပ်တဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြိုတင် အသိပေး ရှောင်ရှားလို့မရအောင် တစ်ကြောင်း၊ စစ်အာဏာ သိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မသိစေချင်တာကြောင့် တစ်ကြောင်း စတဲ့ အကြောင်းအခြင်း အရာတွေကို တားဆီးနိုင်ဖို့ အတွက် အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပိတ်ချထားခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကတော့ တပ်မတော် အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမျိုး ကြိုတင် ပြင်ဆင် လေ့လာပြီးတော့ သိမ်းခဲ့တာလဲဆိုတာကို တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထက် တင်ပြမှာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး အခွင့် အလမ်းတွေနဲ့ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ပေးလာမယ့် ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးတွေကို လိုလားတောင့်တနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနေကြသလို တရားနည်းလမ်းတကျ မဟုတ်ဘဲ အာဏာရယူထားတဲ့ စစ်တပ်က ပေးမယ့် ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးကို ယူလိုက်ရင် သမိုင်းတရားခံဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ပြီ ယူစရာ မလိုဘူး ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ အခုတော့ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ပေးတဲ့ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးကို လက်ခံပြီ ယူနေ ကြ သူတွေ ရှိနေပါပြီ။
ပထမဆုံး အနေနဲ့ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ဟာ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကနေ တဆင့် အစိုးရဖွဲ့ အုပ်ချုပ် ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အစိုးရ မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို လိုက်လံဖြည့်စီးနေတာနဲ့ အစပျိုးပြီးတော့ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးတွေကို ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘာလဲဆိုရင် အခု အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာ ကရင်သူပုန် (KNU)ကနေ နှုတ်ထွက်ပြီးတော့ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ(KPP)ကိုယ်စားပြု ဝင် ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် နေရာပေးခဲ့သလို NLD ပါတီရဲ့ အတိုက်အခံဖြစ်တဲ့ ရခိုင်အမျိုး သား ပါတီ(ANP)က ပါတီမူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်အေးနုစိန်ကိုလည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် နေရာပေး ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် NLD ရဲ့ အတိုက်အခံတွေဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်က ဦးသိန်းညွန့်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီက ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(KySDP)က ဦးစောဒယ်နီ ရယ် (ပါတီက ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီ)တို့ကို နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် နေရာပေးခဲ့ ပါတယ်။
အဲနောက်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးနေရာတွေမှာ NLD ရဲ့ အတိုက်အခံ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)က ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ( PPP)က ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တုန်းက ဝန်ကြီးတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ(KPP)က ဦးစောထွန်းအောင်မြင့်တို့ကို နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ် ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ(KSPP)က ဦးခက်ထိန်နန်၊ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် ချင်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးဝမ္မသူးမောင်းရဲ့သားဖြစ်သူ ဦးတဲရင့်စ်စမွိုင်းနီခွဲတို့ကိုလည်း နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေ အဖြစ် ‘ဝ’ပါတီက ဦးညီနပ်၊ ပလောင်မှာဆို တားသိန်းဇော်တို့ကို နေရာပေး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးတာ တွေ့ရပါ တယ်။
အဲထဲမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(SNLD)ကိုလည်း နေရာပေးဖို့ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် SNLD ပါတီကတော့ နေရာမယူတဲ့အပြင် အကြောင်းပြန်ကြားမှုတောင် မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကတော့ ၂၀၁၅ -၂၀၂၀ အတွင်းမှာ NLD ပါတီ အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ဦးဆောင်တဲ့အခါမှာ နေရာ မပေး-မတည့်ခဲ့တဲ့ အုပ်စုတွေကို အခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က နေရာ ပေးပြီးတော့ ဗမာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားတွေ အနှစ်နှစ် အလလ စောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည် ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးရဲ့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအစကို ဖော်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို တိုးမြင့်ပေးပြီးတော့ NLD ထက် မိမိတို့က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ပေးတာဆိုတဲ့ မှတ်ကျောက်တစ်ခုကို အာဏာ သိမ်း စစ်တပ်က စိုက်ထူဖို့ ကြိုးပမ်းပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ ခြေလှမ်းကို စစ်တပ်နဲ့ အပစ်ရပ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေရော၊ စစ်တပ်နဲ့ အပစ်ရပ်နိုင် ရေး ဆွေးနွေးနေဆဲ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကလည်း စောင့်မျှော်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနေကြသလို စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ မလုပ်ဘဲ ရပ်ထားမယ့် အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။
ဥပမာ- စစ်တပ် ပါဝင် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA) ထိုး ထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့(PPST)ကို ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ PPST အနေနဲ့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာကို ရှုံ့ချကြောင်း၊ ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆိုထားသလို ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ် စဉ်ကို NCA လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားမယ်လို့ ပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ပြတ်သားမှု မရှိပါဘူး၊ အမှန်ဆို စစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံဘူးဆိုရင် ငြိမ်းချမ်း ရေး ဆွေးနွေးစရာလည်း မလိုအပ်တော့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုကို NCA အတိုင်း ဆက်သွား မယ်ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာကို လက်ခံလိုက်သလို ဖြစ်နေပြီ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ပေးလာမယ့် ဖက်ဒရယ်အခွင့်အရေးကို မျှော်လင့် စောင့်စားနေသလို ဖြစ်မနေဘူးလား မေးခွန်းထုတ် စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
အဲလို ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ PPST ထဲမှာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ(RCSS/SSA)ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်က RCSS အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု ဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မတီ(UPDJC) ဆွေးနွေးမှုကို တစ်နှစ်ကြာ ရပ်ဆိုင်း ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံရေးအတွက် မိမိတို့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဒေသထဲမှာ လာရောက် နေထိုင်လိုပါက လက်ခံပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောလာပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ PPST အဖွဲ့ဝင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)ကလည်း စစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ် အားလုံးကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့၊ နိုင်ငံ ရေး ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြဖို့၊ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ အညီ လက်ခံဖို့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ အပါအဝင် သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ပြီးတော့ ပြောထားပါ တယ်။
တခြားသော PPST အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ရခိုင် ALP၊ ပအိုဝ်း PNLO၊ ကျောင်းသားတပ် ABSDF၊ ချင်း CNF၊ ကရင်တွေဖြစ်တဲ့ KNU/KNLA-PC၊ DKBA တို့ကတော့ ပြတ်သားတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ မတွေ့ရဘဲ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ကမ်းလှမ်းလာမှာကို မျှော်လင့်တကြီး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း ကြားနေရပါတယ်။
အဲလိုပဲ စစ်တပ်နဲ့ အပစ်ရပ် လက်မှတ်မထိုးနိုင်သေးဘဲ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေဖြစ်တဲ့ မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့ (KIA-TNLA-AA-MNDAA)တို့ဟာ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ရှုံ့ချကြောင်း၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ထောက်ခံကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးထား တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ စတဲ့ တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက် မထုတ်တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံရေး မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ(SSPP/SSA)၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ် တပ်မတော်- မိုင်းလားအဖွဲ့(NDAA)၊ “ဝ”ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA)တို့ဟာလည်း စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ ရှုံ့ချကြောင်း၊ ပြည်သူ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ထောက်ခံကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ စတဲ့ တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက် မထုတ်တာ အံ့သြစွာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA)၊ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်(MNDAA- ကိုးကန့်)၊ UWSA၊ SSPP၊ NDAA တို့ဟာ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ(FPNCC) အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါ တယ်။
FPNCC အဖွဲ့ဝင်တွေ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေတာက ထူးဆန်းနေပါတယ်။ တခြားသော သတင်းတွေအရ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို တရုတ်က အပြည့်အဝ ထောက်ခံပေးထားတဲ့အတွက် တရုတ် သြဇာ ကို ခံနေရတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ FPNCC အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်း စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ် သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ပြောနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
တရုတ်ရဲ့ သြဇာကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာကို ဘာမှ မပြောဘဲ လက်ခံပေးထားတာလား သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာကို မသိယောင်ဆောင်ပြီ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းလာမှာကို စောင့်မျှော်နေတာလား မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အနှစ်နှစ် အလလ စောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးတွေကို အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ပေး အပ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဆိုတဲ့ အကျိုးမျှော်ချက်နဲ့ အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် တစ်စုံတစ်ရာ တုန့်ပြန်မှု မရှိဘဲ ရင်ငုံနှုတ် ပိတ်နေတာလားဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။
၂၀၁၅-၂၀၂၀ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အစိုးရရဲ့ (၅)နှစ်တာ ကာလာကို ပြန်လည် ဆန်းစစ် ကြည့် တဲ့ အခါမှာတော့ အတောအတွင်းမှာ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေကြသူတွေနဲ့ NLD ကြား ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး အလှမ်းဝေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် NLD နဲ့ လူမျိုးစု ပါတီတွေကြား လည်းကောင်း၊ NLD နဲ့ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တွေကြား လည်း ကောင်း၊ NLD နဲ့ လူမျိုးစု အရပ်သားတွေကြား လည်းကောင်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလည်း အလှမ်းဝေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ အခြေအနေတွေ ဖြစ်တည်လာတဲ့အခါမှာ လူမျိုးစု အရပ်သားတွေ၊ လူမျိုးစု နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တွေဟာ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP)အစိုးရရဲ့ (၅) နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တည်ဆောက် မှုတွေကို ချိန်ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာ NLD ထက် USDP က ပိုပြီးတော့ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးကို ပေးနိုင်ခဲ့တယ် လို့ မှတ်ယူခဲ့ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။ အဲနောက်မှာတော့ USDP ပါတီရဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကိုတောင် ပြန်ပြောင်း တောင့်တကြသူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု USDP ပါတီနဲ့ အစ်ကိုကြီး ညီလေး ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေးတွေကို NLD ထက် အာဏာသိမ်း စစ်တပ် က ပိုပြီးတော့ ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိနိုင်တယ်လို့ ဗမာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက တွက်ဆနေကြပါလိမ့်မယ်။
အဲအတွက်လည်း အာဏာသိမ်း စစ်တပ်အပေါ်မှာ မျှော်လင့်ချက် ကြီးစွာနဲ့ သူတို့ကို ဘယ်အချိန် ကမ်းလှမ်းလာ မလဲဆိုတာကို စောင့်မျှော်နေကြသူတွေ ရှိနေသလို တရားနည်းလမ်းတကျ အာဏာရယူပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းပြီ ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေး ပေးလာမယ့်အပေါ် စိတ်မလုံသလို သမိုင်းတရားခံ အဖြစ်မခံနိုင်လို့ စဉ်းစားမှုတောင် မလုပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က တစ်နှစ် အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားတဲ့အတွက် တစ်နှစ် အုပ်ချုပ်ရေးပြီး နောက် ပြန်လည် ကျင်းပပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ့် ပါတီတွေရှိသလို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မှုကို မလုပ်ဘဲ သပိတ်မှောက်သွားကြမယ့် NLD လိုပါတီနဲ့ ပါတီတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ လတ်တလောမှာတော့ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမြင့်ဆုံး အစိုးရ ယန္တရား ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အပါအဝင် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားထဲမှာ NLD မပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နေရာပေးတာတွေ ပထမဆုံး လုပ်နေသလို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၆၁ ကိုလည်း ပြင်ပေးတာတွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ဖြေလျှော့ကာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်ခွင့်ရဒေသ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရတိုင်းတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာတွေ တိုးမြင့်ပေးတာတွေ လုပ်လာနိုင်သလို ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အခြေအနေတွေကိုလည်း ဖန်တီးပေးလာနိုင်ပါ တယ်။
ပြီးရင်တော့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြု စနစ်ဖြစ်တဲ့ (PR) စနစ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံး လာမှုတွေ လုပ်လာနိုင်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း အမျိုးစောင့်ဥပဒေတွေနဲ့ ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြန်လည် အသက်သွင်းတာတွေလည်း လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ မဟာဗျူဟာအတိုင်း အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က တဆင့်ချင်း ဖော်ဆောင်လာခဲ့မည်ဆိုရင် ပြန်လည် ကျင်းပပေးမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP) နဲ့ တပ်မတော် ပူးပေါင်းပြီးတော့ နောက်ထက် (၅) နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ကိုလည်း ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်နိုင်ခြေ လည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး အနှစ်ချုပ်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ပေးမယ့် ဖက်ဒရယ် အခွင့်အရေး တွေကို ယူကြမှာလား/ မယူဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အခွင့်အရေး ရတုန်း ယူထားမယ်လို့ စဉ်းစားထားရင်လည်း သြဇာခံမဖြစ်အောင် ဘယ်လို ရှောင်တိမ်းမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။